जनताद्धारा बहिस्कृतहरु नै सरकारको नेतृत्वमा, चुनाव जितेका रेशम चौधरी जेलमा - नेपालबहस
जनताद्धारा बहिस्कृतहरु नै सरकारको नेतृत्वमा, चुनाव जितेका रेशम चौधरी जेलमा
| १४:००:४६ मा प्रकाशित
नेपाली राजनीति मात्र हैन, विश्व राजनीतिमा निर्वाचनको माध्यमबाट शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने परिपार्टीको आ–आफ्नै विशेषताहरु हुन्छन् । निर्वाचनको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा हामीले सुन्ने र देख्ने गरेका अनुभवहरु भनेको जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्धारा सरकार सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक दलले आम नागरिक समक्ष गरेको राजनीतिक बाचाका आधारस्तम्भहरु घोषणापत्रमार्फत उजागर गर्दै सोही राजनीतिक एजेण्डाका आधारमा देश विकासको खाका तयार गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारी, निजी तथा अन्य सहयोगी निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढने प्रजातान्त्रिक बिधि र पद्धतिका आधारस्तम्भहरु हुन । यी नै प्रजातन्त्रका गहनाहरु हुन् ।
देश विकास गर्ने दीर्घकालिन सोच मात्र राख्न सक्ने हो भनेपनि नेपालको वर्तमान विकासको गतिलाई दौडाउन सकिने प्रशस्तै आधारहरु देखिन्छन् । सरकार इमान्दार र सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त मात्रै हुने हो भनेपनि वर्तमान नेपालको कायापलट गर्नसक्ने थुप्रै संभावनाहरु जीवितै रहेका छन् । देश बिकासको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु नै पर्दैन, हाम्रै छिमेकी देश भारतको बिहार प्रान्तलाई हेरे पुग्छ । लालुप्रसाद यादवको नेतृत्वकालमा देखिएको बिहारलाई कुशल राजनीतिज्ञ नितिश कुमारले छोटो समयमै परिवर्तन गरेर देखाई दिए । खराव कामको पर्यायका रुपमा सधैं नाम आउने बिहारलाई एउटा कुशल राजनीतिज्ञ तथा असल ब्यवस्थापकले एकै कार्यकालमा कहाँबाट कहाँ पुर्याईदिए । अहिले भारतको बिहारमा नितिश कुमारलाई बिहारको विकास कुमारको उपनामले चिनिन्छ ।
बिहारसँगै सीमाना जोडिएको हाम्रा देशका वर्तमान नेताहरु ठ्याक्कै लालुप्रसाद यादव जस्ता देखिन्छन् । जति शासन गरेपनि सोह्र दुना आठ मात्रै देखिएका, नेपालका जेल बसेर र मान्छे मारेर खारिएकाे भनिएका नेतृत्वबाट लालुप्रसाद यादवको बिहारलाई नितिश कुमारको बिहार बनाउन सक्ने लक्षण भने अहिलेसम्म पनि देख्न सकिएन । सधैं नेतृत्वमा रहिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको विकास र समृद्धिको कुरा निर्वाचनमा बद्री पंगेनीले गाउने गीत र ज्याेति मगरको नाँचमा मात्रै सिमित बन्न पुगेका छन् । जनताको काम भनेको राजनीतिक दलबाट चुनावमा माईक फुट्ने गरी बजाउने चर्का नारा खान र तातोघाममा तालु तताउँदै जिन्दावाद भन्दै नारा लगाउने बाहेक अरु केही पनि देखिएन । जनताका घरमा बसेर, जनताका समस्यामा पसेर, निर्वाचनका बेलामा गाँउ र शहरको विकासका नारा बोकेर राजधानी छिरेका नेताहरु काठमाडौं छिर्ने बित्तिकै गाँउबस्तीका जनता र तिनै जनताका समस्याहरु बिर्सिने क्रम हिजो भन्दा आज झन् झन् बढदै गैरहेका छन् । जसले जनता हिजो भन्दा आज राजनीतिक दलहरुप्रति झनै निराशावादी बन्दै गैरहने अवस्था सृजना हुँदै गैरहेको छ ।
राजनीतिले समय समयमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहन्छ, गरिरहन्छ र गरिरहनु पर्छ । विभिन्न देशमा अपनाईएका आवधिक निर्वाचनका समयसीमा भित्र नेतृत्व परिवर्तनको महान संकल्पसहित अगाडि बढेको र सोही अनुरुप नेतृत्व परिवर्तन भएको देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा ३० औँ बर्षसम्म एउटै ब्यक्तिको नेतृत्वबाट आजित हुँदा पनि नागरिकहरु तिनै बयोबृद्ध नेता र तिनकै नेतृत्वलाई जयजयकार मनाउन मै खुशी देखिन्छन् । विकास कुन चरीको नाम हो भन्ने कुरा अहिले जनतालाई आभाषसम्म हुन छाडेको छ । राजनीतिक दलका नेता जति सबै ठेक्कापट्टा र कमिशनको गोलचक्करमा फँसेका छन् । राजनीतिलाई सेवा भन्दा ब्यवसाय बनाउन पल्केकाहरुको कब्जाबाट नेतृत्व नखोसेसम्म देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने छाँट देखिदैन । नेतृत्वको यही खराब सोच र भ्रष्टाचारयुक्त कामका कारण जनता नेतृत्वप्रति आजित भैसकेका देखिन्छन् । जसका कारण आम नागरिकले राजनीतिमा कुनै पनि परिवर्तनको आभास र अनुभूति गर्न समेत पाएका छैनन् । परिवर्तनका सम्बाहकका रुपमा रहेका नागरिकहरुप्रति नेतृत्वको उदासिनता र हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नागरिकहरु राजनीतिक दलका हतियारका रुपमा मात्र उपयोग हुन पुगेका छन् ।
आम नागरिकहरुले राजनीतिक अधिकारको रुपमा पाँच बर्षमा एकपटक बाध्यात्मक रुपमा मतदान गर्नु बाहेकको कुनैपनि अन्य अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण आम नागरिकहरु आवेश र आक्रोशमा कहिले नेता फेर्ने त कहिले नेतृत्व फेर्ने कुरा गर्दछन् । तर जनताले जति नै प्रयास गरेपनि राजनीतिक दलहरुले जनताको चाहनालाई सधैं तिरस्कार गरिरहेका हुन्छन् । जनताद्धारा मताधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित भएका राजनीतिक दलका नेताहरु सभासदको रुपमा संसदमा हुनुपर्नेमा जनादेशको अपमान गर्दै सरकारले जेल हालेको उदाहरण हाम्रै देशमा छ । जनताका प्रतिनिधि रेशम चौधरीलाई जेलमा हाल्ने सरकार जनताद्धारा आफ्नाे अमूल्य मताधिकारद्धारा तिरस्कृत भएका बामदेव गौतमलाई सभासद बनाउन भने अग्रसर बनेको छ । संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा अमुल्य योगदान पुर्याउने ब्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्ने परम्परालाई तिरस्कार गर्दै जनताको जनादेशद्धारा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित ब्यक्तिहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै सभासद बनाउने होडबाजीले स्वयं जनताको जनमतको अवमूल्यन भैरहेको छ । जनमतलाई कदर गर्ने परिपार्टीलाई यस्तै काखीच्यापेका ब्यक्तिहरुबाट खतरा बढदै गैरहेको छ ।
जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका बिषयमा देशको सरकार सधैं अत्यन्तै चनाखो हुनु पर्दछ । जनताले प्रत्यक्ष अुनभव गर्ने विकासका मोडेलहरुलाई सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुले तत्काल अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । जनताको भावना कहाँ ? कसरी ? प्रष्फुटन भैरहेका छन् ? जनता सरकारसँग के चाहन्छन् ? कुन ठाउँमा के समस्याहरु देखिएका छन् ? सरकारले बनाएका अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना र आयोजनाहरु कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? विकास निर्माणका प्रक्रियामा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ कि छैन ? सरकारी संयन्त्रको स्थानीय नागरिकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचारको गन्ध पाउने बित्तिकै आवश्यक स्पष्टिकरण लिने वा कार्वाही गर्ने हिम्मत सरकारसँग छ या छैन ? कार्वाही गरेका उदाहरणहरु सरकारसँग छन् या छैनन् ? भन्ने यावत कुराहरुलाई ब्यवस्थापकीय रुपमा हेर्ने, अनुगमन गर्ने परिपार्टीको बिकास नहुञ्जेलसम्म देश विकासको बाटोमा अगाडि बढन सक्दैन, जनताले परिवर्तनको आभाश समेत पाउन सक्दैनन् ।
तर यहाँ एउटा ब्यक्तिको लागि सिंगो सरकार सति जानु परिरहेको छ । जनताले पाँहा पछारे झै उत्तानोटाङ्ग पारेर बीच सडकमा पछारेका ब्यक्तिलाई सांसद बनाउन आफैले बनाएको संविधानका धारा परिवर्तन गर्न स्वयं सरकार अघि सरेको छ । जनताको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रकै उपहास गरेर आधा लाख जनमत पाउने जनताको छोरोलाई नखाएको बिष दलेर नेल ठोकिएको छ, जेल कोचिएको छ । एउटा सोझो थारुको छोरोलाई जेलको चौघेरामा थुनेर बामदेवलाई सभासद बनाउन हतारिएको छ । देशकै विज्ञ मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई मिल्काउँदै बामदेव भित्र्याउने रणनीतिले सरकारका एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका नाईकेहरुलाई सत्तामा लैजाने, उपयोग गर्ने अनि कागती निचोरेझै निचोरेर फालिदिने अभियानमा पालैपालो उपयोग गर्न लागिरहेको त छैन ? शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरु देखिदैछन् ।
जे होस्, क. बामदेव गौतमबाट राजनीतिज्ञहरुले सिक्ने धेरै ठाउँहरु देखिएका छन् । राजनीतिमा निरन्तरको उर्जाशिल सकृयता बामदेवको अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो भने कहिल्यै लोभ र लालचबाट मुक्त हुन नसक्ने, पद र कुर्सी बिना कहिल्यै बस्न नसक्ने, जनताको मताधिकारको समेत ससम्मान ग्रहण गर्न नसक्ने एक पदलोलुप नेताको रुपमा उनी दर्ज भएका छन् । नेपालकै इतिहासमा कुनैबेला सरकार आँखा नचम्क्याईबक्स्योस्, हात नलम्क्याईबक्यो्स्, यदि राजनीति नै गर्ने हिम्मत छ भने श्रीपेच नारायणहिटी दरबारमै राखेर जनताका छोरासँग चुनाव लडन आउ र जितेर देखाउ भन्ने नेताहरुको पार्टीभित्र यस्ता जनताद्धारा बहिस्कृत चुनाव हरुवाहरुलाई राष्ट्रियसभामा लैजान किन यस्तो मरिहत्ते गरेका होलान ? आम नागरिक भने नेकपाको सिंगो नेतृत्वप्रति अहिले अचम्म मानिरहेका छन् ।
लामो समयसम्म किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरेका, अखिल नेपाल किसान महासंघको अध्यक्ष समेत रहेर पार्टीभित्र कृषि विभागको नेतृत्व समेत सम्हालेका हुनेवाला राष्ट्रियसभाका सांसद बामदेव गौतमले अब भने आधुनिक कृषि प्रणालीमा फड्को मार्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्लान कि ? भन्ने झिनो आशा बोकेका नागरिकहरुको भावनामा चोट नलागोस् । आम किसान दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले पैसा तिरेर खेतबारीमा हाल्ने मल किन्न पाउन । किसानको उत्पादनले बजारमा मुल्य पाओस् । आम किसानका मुहारमा खुशी छाओस् । राष्ट्रियसभाको सदस्य सँगै अब संबिधान संशाेधन गरेरै भए पनि वरिष्ठ मन्त्री बन्दै सरकारको नेतृत्वमा जाने दरबाजा खुल्ला हुँदै जाउन् । छिट्टै बामदेवले सरकारी क्वाटरको उपयोग गर्न पाउन । क. बामदेव गौतमलाई मेरो पनि साधुवाद छ । बामदेवको स्वार्थका लागि बली चढाईएका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति भने मेरो सधैं सहानुभूति रहने छ ।
वामदेव गौतमविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु १५ घण्टा पहिले
नेताहरुबीच सहमति नजुट्दा सचिवालय बैठक स्थगित ६ दिन पहिले
चुनाव हारेका वामदेव गौतम बने सांसद ७ दिन पहिले